Orlistat ntụ ntụ (96829-58-2) hplc≥98% Emeputa & ụlọ ọrụ
Rating: SKU: 96829-58-2. Category: Ọla abụba
Usoro Molecular: C29H53NO5
Melt Point: 50 Celsius
Aha ngwaahịa: Orlistat
Ihe kariri ọkara nke ndị ụwa anwalegoro usoro nlekọta ibu, dị ka ịnya nri, mmega ahụ, ịwa ahụ, ma ọ bụ ọgwụ. Ngwọta ọnwụ ndị a niile dị irè naanị ma ọ bụrụ na ị na-ekwesị ntụkwasị obi nye ha ma soro ntuziaka ndị ahụ. Agbanyeghị, ịhọrọ ịwa ahụ ma ọ bụ ọgwụ nwere ike bụrụ ihe na-emebi mgbe ị na-akpachaghị anya.
Omume Orlistat dị ka ihe mgbochi lipase, nke pụtara n'ozuzu na ọ na-egbochi nsị nke abụba na nri, si otú a belata calorie ị na-ewere. Dị ka ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ na-efu ọnwụ, Orlistat a na-eji ya mee ihe na ngbanwe ndị ọzọ dị ndụ dị ka mmega ahụ na nri. Ihe omumu omumu na-egosi na ndi mmadu na-ejide onwe ha na nchikota a na-enwe ohere inweta uzo abuo ma o bu ato karia ndi na-agunyeghi ogwu ahu n'ime ihe ndi ozo.
Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ Orlistat uru iji nwee obi ụtọ, enwerekwa ụfọdụ nsonaazụ Orlistat ị paya ntị. Mmetụta mmetụta a na-akọkarị banyere ọgwụ mgbochi ọnwụ a bụ steatorrhea. Nke a bụ eriri afọ nke ji mmanu mmanu, eriri afọ nwere. Ihe mgbaàmà ahụ, obi ụtọ, belata oge.
Orlistat usoro nke ihe
Orlistat bụ Intestinal Inthibitiman Inhibitor. Ọgwụ a bụ ihe na-emegharị ihe na-emechi ihe na-arụ ọrụ maka egbugbere ọnụ eriri afọ. Ọgwụ ahụ na-emekọrịta njikọ na-arụ ọrụ na saịtị serine na-arụ ọrụ na pancreatic na gastric lipases, si otú a na-egbochi ime ihe ha na igbochi abụba site na nri site na ịbụ hydrolyzed na itinye obi gị dum. (NCI04).
N'iji ọgwụ ndenye ọgwụ nke 120 mg 3 ugboro kwa ụbọchị tupu nri, ma ọ bụ ndepụta ọgwụ mgbochi ọnwụ na-egbochi ihe dịka 30 pasent nke abụba na-edozi ahụ ka ọ banye n'ime ahụ. Morenara otutu ogwu adighi enye nsogbu di ike.
Orlistat na-abịa n'ụdị turquoise, capsules siri ike-gelatin nke nwere pellets nke ntụ ntụ ma tụọ 120-mg. Ngwadogwu a na-atụ aro kwa ụbọchị bụ capsules atọ n'ụbọchị. Ikwesighi iri mkpụrụ ọgwụ atọ a mgbe ị na-aga, mana kama were mbadamba ọ bụla na isi nri nwere abụba, ya bụ, otu maka nri ụtụtụ, otu maka nri ehihie, na otu maka nri abalị. Can nwere ike were mkpụrụ ọgwụ ọ bụla na nri ma ọ bụ rue otu elekere mgbe nri. Ọ bụrụ na a naghị eri nri, ma ọ bụ ọ bụrụ na nri gị enweghị abụba, enwere ike ịhapụ Orlistat dose. Achọpụtaghị ihe dị n'elu usoro ọgwụgwọ a na-atụ aro kwa ụbọchị iji nye uru ọzọ.
Achọpụtala Orlistat dị ka ihe dị mma n'ibelata ntinye nke ụfọdụ vitamin ndị nwere ike ịba abụba na beta-carotene. Dị ka ndị dị otú a, a gwara ndị na-a theụ pill ahụ ka ha were ya na vitamin nwere ọtụtụ vitamin nke nwere vitamin nwere ike soluble abụba iji hụ na nri zuru oke. A na-atụ aro ka ewere vitamin mgbakwunye opekata mpe awa abụọ tupu ma ọ bụ mgbe ị nụsịrị Orlistat.
Nke a bụ ọnọdụ nke na-egbochi mgbochi bile na imeju. E nwere ọtụtụ akụkọ nke na-ejikọta ma ọ bụ na-edebanye aha na nnukwu mmerụ imeju, ọ bụ ezie na ọ na-eme n'ọnọdụ ndị na-adịghị adị ma ọ bụ n'okpuru nnukwu usoro.
Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịgwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị na-a medicinesụ ọgwụ ọ bụla ọzọ ọkachasị ndị nwere ike igbochi usoro mgbochi. Mkparịta ụka ọgwụ ọjọọ ga-egbochi ọgwụcokinetics, na-eduga na mmụba ma ọ bụ belata na nke ọ bụla n'ime ha. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-edebanye aha ha ga-egbochi usoro ọgwụ ndị enyere maka ịkpụgharị akụkụ ahụ.
Ọnọdụ dị otú ahụ dị obere mana ọ ga - eme mgbe ị nwere nsogbu imeju na - akpata, ma ọ bụ were usoro onunu ogwu. Na 2010, FDA gụnyere ịdọ aka ná ntị nchebe na aha aha, nke na-egosi ihe egwu nke ọnya imeju nwere ike.
Otú ọ dị, mmetụta a ka na-arụrịta ụka na-atụle na nchọpụta ikpe ọzọ nke e bipụtara na British Medical Journal gosiri na ọ bụghị.
Mmetụta ndị ọzọ na-adịghị ahụkebe gụnyere nchekasị, isi ọwụwa, afọ mgbu, ahụ erughị ala, ike ọgwụgwụ, agụụ dị ala, na gallstones. Ọ bụrụ na ị na-enwe mgbaàmà ọria, ị kwesịrị ịgwa dọkịta gị ozugbo ma ọ bụ gaa na FDA Reporting Program.